ယခင်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။. ။ March 30, 2018.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ရာထူးကဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကို အဂတိလိုက်စားမှု စွဲချက်သစ်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေက အရေးယူလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ပိုင် ရဟတ်ယာဉ် ၀ယ်ယူ အသုံးပြုရာမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့မညီဘဲ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၅ အရ နေပြည်တော်မှာ အင်္ဂါနေ့ကပဲ တိုင်ကြားထားကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ရာထူးက ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ အရပ်သားအစိုးရ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက တိုက်တွန်းနေချိန်မှာပဲ အာဏာပိုင်တွေက နောက်ထပ်စွဲချက်သစ်နဲ့ အရေးယူဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး စွဲချက်အတွက် တရားရုံးက အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့အပြင် နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ ၃ ယောက်ကို အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လုပ်မှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅-ခ နဲ့ အစောပိုင်းမှာ တရားစွဲထားတဲ့အမှုအတွက် အင်္ဂါနေ့မှာ အမိန့်ချမယ့် အစီအစဉ်ကိုလည်း နောက်သီတင်းပတ်ကို ရွှေ့ခဲ့တာပါ။ မူလတုန်းက နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ အမိန့်ချဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်းအတွင်း နေပြည်တော် အထူးတရားရုံး တရားသူကြီးက သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ကကို ရွှေ့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီရင်ချက်ချက်ဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းမြင့်တို့အပေါ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ သီးခြားစီ တရားစွဲထားတဲ့ အမှု ၂ ခုကိုလည်း လာမယ့် တနင်္လာနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာပဲ အမိန့်ချဖို့ တရားရုံးက စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဦးဝငျးမွငျ့တို့အပျေါ အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ နောကျထပျတရားစှဲ
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးပွီး ရာထူးကဖယျရှားခံခဲ့ရတဲ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့တို့ကို အဂတိလိုကျစားမှု စှဲခကျြသဈနဲ့ အာဏာပိုငျတှကေ အရေးယူလိုကျကွောငျး နိုငျငံပိုငျ သတငျးတှကေ ဖျောပွပါတယျ။
နိုငျငံတျောပိုငျ ရဟတျယာဉျ ဝယျယူ အသုံးပွုရာမှာ လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့မညီဘဲ တိုငျးပွညျဘဏ်ဍာ ထိခိုကျစတေယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြနဲ့ အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျမ ၅၅ အရ နပွေညျတျောမှာ အင်ျဂါနကေ့ပဲ တိုငျကွားထားကွောငျး သတငျးထုတျပွနျခဲ့တာပါ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး ရာထူးက ဖယျရှားခံခဲ့ရတဲ့ အရပျသားအစိုးရ ထိပျတနျး ခေါငျးဆောငျတှေ အပါအဝငျ ဖမျးဆီးထားသူတှကေို ပွနျလှတျပေးဖို့ ကုလသမဂ်ဂ အပါအဝငျ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးက တိုကျတှနျးနခြေိနျမှာပဲ အာဏာပိုငျတှကေ နောကျထပျစှဲခကျြသဈနဲ့ အရေးယူဖို့ စီစဉျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အခုနောကျဆုံး စှဲခကျြအတှကျ တရားရုံးက အပွဈရှိတယျလို့ ဆုံးဖွတျရငျတော့ အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျ ထောငျဒဏျ ၁၅ နှဈအထိ ကခြံရနိုငျပါတယျ။
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့တို့အပွငျ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမြိုးအောငျတို့ ၃ ယောကျကို အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလုပျမှု ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၅၀၅-ခ နဲ့ အစောပိုငျးမှာ တရားစှဲထားတဲ့အမှုအတှကျ အင်ျဂါနမှေ့ာ အမိနျ့ခမြယျ့ အစီအစဉျကိုလညျး နောကျသီတငျးပတျကို ရှခေဲ့တာပါ။ မူလတုနျးက နိုဝငျဘာ ၃၀ ရကျမှာ အမိနျ့ခဖြို့ ပွီးခဲ့တဲ့ရုံးခြိနျးအတှငျး နပွေညျတျော အထူးတရားရုံး တရားသူကွီးက သတျမှတျခဲ့ပမေဲ့ ဒီဇငျဘာလ ၆ ရကျနကေ့ကို ရှလေို့ကျတာ ဖွဈပါတယျ။ စီရငျခကျြခကျြဖို့ ရှဆေို့ငျးလိုကျတဲ့ အကွောငျးရငျးကိုတော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မသိရပါဘူး။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဦးဝငျးမွငျ့တို့အပျေါ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ သီးခွားစီ တရားစှဲထားတဲ့ အမှု ၂ ခုကိုလညျး လာမယျ့ တနင်ျလာနေ့ ဒီဇငျဘာ ၆ ရကျနမှေ့ာပဲ အမိနျ့ခဖြို့ တရားရုံးက စီစဉျထားပါတယျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ ငါးဦးအမှု တရားလို စတင်စစ်ဆေး